एसिड अट्याक : मुस्कान, संगीता, बिन्दबासिनी र बसन्ती लाइभ, भन्छन्-‘एसिड छ्याप्नेलाई कडा सजाय होस्’ (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
एसिड अट्याक : मुस्कान, संगीता, बिन्दबासिनी र बसन्ती लाइभ, भन्छन्-‘एसिड छ्याप्नेलाई कडा सजाय होस्’ (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Oct 08, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४४० औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।
निम्न विषयमा रिपोर्टहरु पनि प्रस्तुत गरिएका छन्ः
१. एसिडको सहज विक्री वितरण रोकियोस !
काठमाडौं । नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म फ्याट्ट फुट्ट सुनिने एसिड अट्याक अर्थात तेजाब छ्याप्ने अपराध अहिले धेरै सुनिन थालेको छ । प्रेम तथा विवाह अस्वीकार वा अन्य रिसको कारण अहिलेसम्म करीब २ दर्जन किशोरी, महिलाहरु यसको सिकार बनिसकेका छन् । हेटौडाँकी विन्दवासिनी कंशाकार, काठमाडौंकी संगिता मगर र सीमा बस्नेत, काठमाडौैंकै जेनी खड्का, रौतहटकी सम्झना कुमारी र सुस्मिता कुमारी, नवलपुरकी बसन्ती परियारदेखि केही दिन अघि मात्रै तेजाब प्रहारको सिकार बनेकी मुस्कान खातुनसम्म आइपुग्दा एसिड अट्याकमा पर्नेको संख्या १६ पुगेको छ । २ जनाले भने ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
२. मुस्कुराउँदै छिन् ‘मुस्कान’
काठमाडौं । एसिड अट्याकको पछिल्लो घटना विरगञ्जकी १४ बर्षीया मुस्कान खातुनमाथि भयो । एक महिनाअघि विद्यालय जाँदै गरेकी खातुनलाई उनको बाटो ढुकेर बसेका स्थानीय सम्साद मियाँ र माजिद आलमले उनलाई पहिले त पानीका रुपमा पिउन आग्रह गरे । तर, मुस्कानले उनीहरुलाई वेवास्ता गरेपछि उनको अनुहारमा एसिड छ्यापे । उनीहरुलाई प्रहरीले घटनाकै दिन र भोलिपल्ट नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
३. यस्तो पीडा कसैलाई नपरोस् : संगिता मगर
काठमाडौं । पाँच बर्ष अघि बसन्तपुरको एक ट्युसन सेन्टरभित्र एकाविहानै एसिड अट्याक भयो । एसएलसीको तयारी गरिरहेकी संगिता मगर र सीमा बस्नेतमाथि जीवन बिकले एसिड छ्याप्पेका थिए । यो घटनापछि एसिड अट्याकको बिषयमा नेपालमा बहस सिर्जना हुन थालेको थियो । सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर एसएलसीको तयारी गरिरहेका दुई किशोरीमाथि एसिड अट्याक भएपछि क्षणभरमै आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न मुस्किल हुन थाल्यो ।
देशभर मौसम बदली, पश्चिम नेपालतिर वर्षाकाे सम्भावना
गृहयुद्धका वेला बेपत्ता रहेका २० हजार नागरिककाे मृत्यु भइसक्याे : श्रीलंकाली राष्ट्रपति
access_time 8:57 am
access_time 8:41 am
काठमाडौं, ०७ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज ’भिडियो
काठमाडाैँ, ७ माघ । सोमबार दिउँसो प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको
एजेन्सी, ७ माघ । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले पहिलोपकट देशमा चलेको गृहयुद्धको क्रममा बेपत्ता भएकाहरुका बारेमा औपचारिक